अबको प्रधानमन्त्री को बन्ला ? | नेपाल इटाली डट कम
अबको प्रधानमन्त्री को बन्ला ?
May 10, 2009 — nepalitaly
दीपेश केसी, काठमाडौं ।
माओवादी अध्यक्षको राजीनामाले राजनीतिमा नयां सम्भावना र चुनौती निम्त्याएको छ । गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो प्रधानमन्त्रीका लागि ढोका खोलिदिएका छन् । एउटा अन्यौलको अन्त गर्न उनको कदम उपयुक्त र प्रशंसनीय ठानिएपनि अर्को अन्यौल थपिदिएको छ ।
संसदीय आधारमा टेकेर अगाडि बढ्दा गणीतिय हिसाबले पनि कांग्रेस र एमालेसंग पर्याप्त सिट संख्या छैन । दुवै दल मिल्दा पनि मधेशी जनअधिकार फोरमको समर्थनविना सरकार गठन कठिन हुनजान्छ । फोरमले साथ नदिएमा दुवै दललाई तमलोपा, सदभावना पार्टी र नेकपा मालेको समर्थन लिइकन पनि संविधानसभामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
गणीतिय आधारमा हेर्दा बलियो देखिएको माओवादीले पुनः सरकार गठन गर्न कि त एमालेको कि त कांग्रेसको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । फोरमको समर्थन लिएर केही साना दलको समर्थ लिए माओवादीले सरकार गठन गर्नसक्छ । तर त्यो सम्भावना तत्काल देखिदैन ।
अहिले एमाले सरकारको नेतृत्वको लागि सक्रिय छ । पार्टीभित्र माधवकुमार नेपालको चर्चा छ । महत्वपूर्ण पदमा पुग्नेबेलामा चुक्ने गरेका नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेमा कमैलाई मात्र विश्वास छ । संविधानसभामा दुइ ठाउंमा हारेर पनि सभासद मनोनित भएकोमा उनको आलोचकहरु धेरै छन् ।
झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि महत्वाकांक्षी बनेका छन् । उनले विदेशी देखि प्रचण्डसम्मलाई भेटेर समर्थन पाउने अभियान थालेका छन् । प्रचण्डको राजीनामाकै दिन उनले राति मधेशी जनअधिकार फोरमका नेताहरुसंग गोप्य छलफल गरे । फोरम नेताहरुले मधेशको मुद्दामा कडा नीति राख्ने खनाललाई समर्थन गरिहाल्ने इच्छा देखाएनन् । अर्का नेता केपी ओली पनि अगाडि देखिन्छन् । संविधानसभाको चुनावमा हार्नुका साथै पार्टी अध्यक्षमा पनि पराजित भएका उनको सम्भावना त्यति देखिदैन ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छैन । यद्यपि एमालेले सहमति जुटाउन नसके उसको सम्भावना टरेको छैन । मधेशवादी दलहरु पनि मौकाको पर्खाइमा छन् । फोरम, तमलोपा, सदभावना पार्टीले बैठक बसेर संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चालाई ब्यूझाएका छन् । यसले पनि कांग्रेस र एमालेको असफलतालाई मौका बनाउन उनीहरु आतुर देखिन्छन् । मधेशवादी दलहरुले एकजुट भएर प्रस्ताव सार्ने क्रम शुरु भएको छ । उनीहरुले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने रणनीति बनाउदै उपेन्द्र यादव या महन्थ ठाकुरलाई अगाडि सार्ने योजना बनाएको छ । दुवै नेताको सम्भावना पनि न्यून छ । प्रायः फुटिरहने मधेशवादी दलहरु प्रधानमन्त्री पाउन एकजुट होलान् भन्नेमा कमैलाई विश्वास छ ।
सम्भावना र चुनौतीहरुकाबीच सरकारको नेतृत्वकर्ता ठम्याउन कठिन देखिएको छ । तथापि सरकार गठन अनिवार्य र अवश्यम्भावी छ । यसबीच राष्ट्र्पतिको निर्वाचनमा जस्तै अप्रत्याशित अनुहार आउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
Posted in nepal, Uncategorized. LeaveaComment »
माधवकुमार नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावित »